ज्योती लाइफको ९० कित्ता शेयर अधिकतम मूल्यमा कारोबार | Notebazar
ज्योती लाइफको ९० कित्ता शेयर अधिकतम मूल्यमा कारोबार
Note Bazar २५चैत्र, २०७७, बुधबार / Apr 07, 2021 10:50:am
ज्योती लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार सुरु भएको छ । पहिलो दिन बुधबार इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता शेयर ३६० रुपैंयामा किनबेच भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेले दिएको कारोबार संकेत JLI मा ज्योती लाइफको शेयर कारोबार सुरु भएको हो ।
स्पेशल प्रि ओपनिङमा इन्स्यारेन्सको प्रतिकित्ता शेयर तोकिएको रेञ्जको उच्चतम मूल्यमा कारोबारमा आएको हो ।
यस दौरान १० कित्ताका दरले ९ कारोबारमा इन्स्योरेन्सको ९० कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
नेप्सेले इन्स्योरेन्सको पहिलो कारोबारका लागि १२० रुपैंया २९ पैसादेखि ३६० रुपैंया ८७ पैसोको ओपनिङ रेञ्ज तोकेको थियो ।
दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारका लागि कम्पनीले मंगलबार ६६ लाख कित्ता आईपीओ सहित कुल २ करोड २० लाख कित्ता शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सूचीकृत गरेसँगै आजदेखि कारोबार खुलेको हो ।
ज्योति लाइफले फागुन २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म कुल ६६ लाख कित्ता प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमध्ये ३ लाख ३० हजार कित्ता १२ वटा सामुहिक लगानी कोषका इकाईलाई र ३ लाख ३० हजार कित्ता शेयर ज्योति लाइफमा कार्यरत ३१४ जना कर्मचारीलाई सुरक्षित गरी ५९ लाख ४० हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारणबाट आवेदन माग गरिएको थियो ।
उक्त शेयर गोलाप्रथाबाट ५ लाख ९४ हजार जनाले गोलाप्रथाबाट १० कित्ताका दरले पाएका छन् । कम्पनीको शेयर चैत १३ गते शुक्रबार बाँडफाँड भएको थियो ।
ज्योति लाइफको शेयर आजदेखि दोस्रो बजारमा, अधिकतम ३६० रुपैयाँसम्म पहिलो कारोबार खुल्दै 07/04/2021
ज्योति लाइफको आइपीओ सूचीकृत, कतिमा खुल्छ पहिलो कारोबार ? 06/04/2021
नेप्सेका सीईओको विदाले ज्योति लाइफको शेयर सूचीकरणमा ढिलाई 05/04/2021
आइटी अडिटको प्रतिवेदन बुझाउन बीमा कम्पनीले थप समय पाउने 26/03/2021
ज्योति लाइफको आइपीओ नतिजा हेर्न साँझ ६ बजेसम्म पर्खनुपर्ने ! 26/03/2021
ज्योति लाइफको आईपीओमा ४४ हजार आवेदन भए रद्ध, ५ लाख ९४ हजारले पाए १० कित्ता 26/03/2021
ज्योति लाइफको आइपीओ बाँडफाँड, रिजल्ट कसरी हेर्ने ? 26/03/2021
ज्योति लाइफको आईपीओ बाँडफाँड आज, ५ लाख ९४ हजारलाई १० कित्ता 26/03/2021